Izicelo Factory, Suppliers | China Izicelo Abakhiqizi
Pharmaceutical Ngo yokukhiqiza zemithi, poweders abaningi kakhulu hygroscopic.When olumanzi, zilukhuni ukucubungula futhi kungagcini eshalofini-ukuphila. Ngenxa yalezi zizathu, ngo-yokukhiqiza, emabhokisini futhi inqubo ukugcina imikhiqizo zemithi, ezingeni lilawulwa umswakama i ...
Umthombo oyinhloko VOCs izinhlanganisela ezenziwa umuntu ezinengilazi, ikakhulukazi upende ezinengilazi zokuzivikela. Imithi yokususa ingcekeza elenkani ziyadingeka ukusakaza ifilimu ovikelayo noma zokuhlobisa. Ngenxa solvency izakhiwo zalo ezinhle, NMP isetshenziswa ukuncibilikisa anhlobonhlobo polymers. Iphinde isetshenziselwe kakhulu lithium ion fabricat ...
Ukudla A elawulwa kahle emoyeni nomswakama ezingeni kubaluleke kakhulu izinga umkhiqizo osuphelile umkhakha ukudla ezifana ushokoledi kanye noshukela, kokubili okumane kakhulu hygroscopic.When nomswakama kuphezulu, umkhiqizo uzogcina ungamunca umswakama bese ziba okunamathelayo, khona-ke unamathela ukuze emaphaketheni imishini ...
Lithium Imboni Lithium amabhethri ziphezulu hygroscopic futhi umswakama imikhiqizo olubucayi futhi kakhulu ngendlela engabekezeleleki lithium yokukhiqiza kuzobanga izinkinga eziningi imikhiqizo lithium, ezifana ukuntengantenga ukusebenza, nokwehla kweminyaka umuntu eshalofini, ukunciphisa sokukhishwa umthamo. Lokhu Kungakho Importa ngakho ...
agcine, Isitoreji esiqandisini
Esiqandisini Isitoreji enkingeni enkulu kusitoreji esiqandisini kuyinto isithwathwa neqhwa, ngoba lapho izikhatha zomoya oshisayo iza mbeni endaweni ebandayo, lesi simanga is ngenakugwemeka. Uma dehumidifiers zisetshenziswa ukwakha ibhoduluko ezomile kusitoreji esiqandisini, lezi zinkinga ziyoxazululwa i ...
Military Isitoreji Amashumi ezinkulungwane dehumidifiers zisetshenziselwa ukuvikela ezibizayo nezempi kuzo zonke izingxenye zomhlaba, ukusika izindleko yesondlo kakhulu nekwenyusa ukulwa ukulungela eziphathelene nezempi ezifana izindiza, amathangi, imikhumbi kanye nezinye izinto lempi. produc Ezihlobene ...
Umquba Iningi aqukethe usawoti amanzi-encibilikayo, okuye kungase kutholakale ukuthi ngempumelelo usinika izakhi yezimbiwa ukuba crops.All Umanyolo izinto ezithinteke ngokuqondile amanzi futhi kungaba uxhumana umswakama emkhathini avame kuholele Imiphumela engathandeki ezifana caking o. ..
Lapho isitshalo amandla enuzi isicimile for refueling-inqubo ukuthi kungathatha lonke emoyeni engu-dehumidified ungagcina izingxenye ze-non-zenuzi ezifana boilers, condensers, futhi imishini kagesi nokugqwala khulula. Inkinga nomswakama ka umkhakha plastic ngokuyinhloko kubangelwa lomkhuba ukufingqa phezu su ...